Muuse Biixi Cabdi oo maanta la caleema saarayo | Somali National Television - sntv.so
Home SOMALILAND Muuse Biixi Cabdi oo maanta la caleema saarayo
Muuse Biixi Cabdi oo maanta la caleema saarayo
Muuse Biixi Cabdi Madaxweynaha dhawaan la doortay ee Somaliland lafilayaa in maanta lagu caleema saaro magaalada Hargeysa,iyadoo qaban qaabo ku aadan munaasabadda dhaarinta madaxweynaha ay haatan ka socoto aqalka madaxtooyada.
Xafladda Caleema saarka ayaa waxaa ka soo qeyb galaya Marti sharaf kala duwan oo lagu casuumay xaflada,Madaxweynaha xilka degaya Axmed Siilaanyo ayaa lagu wadaa in uu maanta xilka ku wareejinaya Madaxweynaha cusub Muuse Biixi Cabdi.
Sidoo kale Munaasabadda ayaa waxaa ka qeyb galaya Madaxweynihii hore ee Somaliland Daahir Rayaale Kaahin iyo mas’uuliyiin kale.
Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa waxaa dhawaan loo doortay in uu noqdo madaxweynaha cusub ee Soomaaliland,kadib markii uu ka guuleystay musharixiintii kula tartamaysa xilka madaxweynenimo,taasi oo dhawaan ka dhacday halkaasi.
Previous articleSomalia oo dib u soo nooleyneysaa Dhaqanka & Dalxiiska si dalka nabad iyo horumar loogu soo dabaalo+Sawirro
Next articleHogaamiyeyaasha Islaamka oo maanta kulan ka yeelanaya go’aankii Donald Trump
Madaxweyne Hassan sheikh Maxamuud oo caawa magacaabay Lataliyeyaal Cusub.
Madaxweyne Hassan sheikh oo dowladda Imaraadka carabta uga mahadceliyey garab istaaga umadda soomaaliyed .
Gudoomiyaha Golaha Aqalka sare oo kulan la qaatay Safiirka Dowladda Turkiga u qaabilsan Soomaaliya.
Madaxweyne Hassan sheikh oo dowladda Imaraadka carabta uga mahadceliyey garab...
Gudoomiyaha Golaha Aqalka sare oo kulan la qaatay Safiirka Dowladda Turkiga...